Iindaba-Ngaba kufanelekile ukuthenga iingxowa ze-UV zokucoca iintsholongwane?
Ukusigcina kwintsholongwane, sinokukhetha ukunxiba iimaski, ukuhlamba izandla, ukugcina umgama ekuhlaleni. Kodwa xa sisiya eluntwini, yonke impahla yethu inokuba semngciphekweni wokuthwala intsholongwane ibuyisele ekhaya, njengefowuni ephathekayo eyinxalenye yethu namhlanje. Ungamisa njani ii-mobiles / amaqhosha / isambrela / iisongo kwintsholongwane? Ingxowa ye-UV ye-sterilizer okanye ubhaka unokukunceda kakhulu.
Ukukhanya kwe-UV kunoluhlu olusebenzayo, oluphazamisa kwaye lutshabalalise ii-nucleic acid zebacteria kunye nezinye iintsholongwane. Ngumbono olungileyo ukubeka ukukhanya kwe-UV ebhegini okanye ebhegini elula nokulula ukuyithatha.
Kutshanje siphuhlise ingxowa ye-UV yesithinteli enokuqhotyoshelwa kubhaka. Ingxowa ye-UV inokunceda ngokwenene xa usiya esidlangalaleni okanye uhlala ekhaya. Unokubeka izitshixo, iimaski, iselfowuni, iiglasi, iibrashi zokuhombisa okanye iibhotile zamanzi. Uyazi ukuba awuyihlambi ibhotile yakho rhoqo njengoko kufanele.
Ingxowa ye-UV yesithinteli ayinakunceda kuphela, kodwa abantu abakungqongileyo, usapho lwakho okanye oogxa bakho kunye nabahlobo. Banokuyisebenzisa xa ifumaneka, njengoko ukukhanya kwe-UV kungazibulala iintsholongwane ngokukhawuleza okukhulu.
Nangona kunjalo, ukuthenga ibhegi yesithinteli se-UV ayisiyondawo yokunyanga, ukuthintela intsholongwane, kwaye ayithathi ndawo okanye kunciphise isidingo sokuhlamba izandla kunye nokwenza umgama okhuselekileyo ekuhlaleni. Isinika lula ukuba sibulale iintsholongwane kwimpahla yethu kwaye isikhumbuza ngokuhlala silumkele ukwenza zonke iintlobo zokubulala iintsholongwane. Ngokubanzi, yimveliso elungileyo ukuyithenga.